Faah faahin dagaal ay ka dhasheen khasaare oo maanta ka dhacay Kismaayo. – SBC
Faah faahin dagaal ay ka dhasheen khasaare oo maanta ka dhacay Kismaayo.
Wararkii ugu dambeeyay ee ka soobaxay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hose ayaa sheegaya in dagaalkii ka dhacay maanta uu dhexmaray laba dhinac oo ka soo kala jeeda dowlad goboleedka Jubaland iyo Siyaasi hada ka hor sheegtay in uu yahay Madaxweyne oo Isla kismaayo degen.
Iftin Xasan Baasto oo ah siyaasiga sheegtay in uu yahay Madaxweynaha Jubalanad ayaa maanta u dhaqaaqay halka uu magaalada Kismaayo ka degenyahay Wasiirka wasaarada Difaca Soomaaliya Mr Fiqi balse waxaa dhashay is qabqabsi inta aanu la kulmin wasiirka dhexmaray isaga iyo ciidan ka tirsan kuwa Raaskambooni ee Maamulka Jubaland.
Ka dib isqabqabsigaasi ayaa waxa uu sheegay Siyaasi Baasto in ciidanka Raaskamboomi isku dayeen in ay afduubtaan ka dibna uu sidaasi ku bilowday isku dhac dhexmaray isaga ilaaladiisa iyo Ciidanka Jubaland.
Dagaal la isku adeegsaday Hubka noocyadiisa kala duwan ayaa qarxay waxaana uu soconayay Mudo saacad ah kaas oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
Sida ay noo xaqiijinayaan wariye yaasha SBC ee Kismaayo ilaa 4 qof ayaa ku dhintay dagaalka dhacay maanta waxaana ay isugu jiraan Shacab iyo askar labada dhinac ka soo kala jeeday.
Waxa jira dhaawac kale oo labada dhinac iyo dad rayid ahba soo gaaray oo aan la xaqiijin karin tiradooda, waxaana la gaarsiiyay qaarkood goobaha caafimaad ee magaalada Kismaayo.
Xaalada Magaalada ayaa saacadahan ugu dambeeya degen mana jiraan sida la soo warinayo wax rasaas ah oo la maqlayo, balse waxay cabsi xoogleh ku abuurtay dhacdadii maanta dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada .
Kismaayo waxay la ciir ciireysaa Ciidan Militeri ah oo Hubeysan, kuwo dhinacyo kale ka soo jeeda oo iyaguna hubeysan, waana tan keentay isku dhaca maanta dhacay iyo cabsida ay qabaan shacabka magaaldaas ku dhaqan.